Wararkii ugu danbeyey qarax ka dhacay Gaalkacyo | Radio Wadani News
Home » WARARKA » Wararkii ugu danbeyey qarax ka dhacay Gaalkacyo
October 16, 2019	18 Views
RadioWadani-Taliyaha saldhiga Bartamaha Magaalada Gaalkacyo ee Puntland Cabdiqani xabuun ayaa ka bad baadey qarax loogu xiray Gaarigiisa.
Wararka laga helayo Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta gobolka Mudug ayaa waxaa ay sheegayaan in qarax loogu xiray gaarigiisa uu ka badbaaday Taliyaha saldhiga Bartamaha Magaalada Gaalkacyo ee Puntland Cabdiqani xabuun.
Taliyaha ayaa la sheegay in Gaarigiisa uu ogaaday in qarax uu ku xiran yahay,kadib markii uu ka shakiyey xilli uu doonayey in uu ku aado goobtiisa Shaqada,waxaana la sheegay in uu qarxay mudo 15 daqiiqao kadib markii la ogaaday.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in qaraxaasi aysan wax khasaaro ah kasoo gaarin taliyaha iyo qoyskiisa,kadib markii dhamaantood ay ka baxeen guriga oo uu dhex yaallay gaariga miinada lagu xiray ee qarxay.
Laamaha Ammaanka Gobolka Mudug ayaa haatan waxaa ay wadaan baaritaano ku aadan sida ay wax u dhaceen iyo dadkii ka dambeeyey in qarax loogu xiro gaarigiisa taliyaha saldhiga Bartamaha Magaalada Gaalkacyo ee Puntland.
Previous: Shaqaalihii dhismaha Golaha deegaanka oo isaga baxay Buulo-Burde
Next: Mareykanka oo Wafdi u diraya dalka Turkiga